About Us - Qingdao Antai culus Industry Co., Ltd
Qingdao Antai culus Industry Makiinado ayaa la aasaasay sanadkii 2003, si rasmi ah u beddelay si ay magaca hadda ee 2011. Waxay ku taallaa xeebta quruxda badan galbeed ee Qingdao, waa kaliya 30 km si ay dekedda Qingdao, ku haboon gaadiidka dhoofinta. aagga Our workshop daboolayaa in ka badan 15000 mitir oo laba jibbaaran, waa shirkad cilmi, design, soo saaridda, rakibaadda iyo warshad talinta for dhameystir dusha sare, ilaalinta deegaanka iyo xalka macdantu.
Company leeyahay waayo-aragnimo ballaaran iyo isu keentaa shaqaalaha farsamo iyo xirfadeed, inta badan soo saartaa shot engeeg mashiinka, qalabka noqoshadii xoriyada ciid, qalabka wax taaj oo kale, iyo ururiyaha ciidda. Qingdao Antai waa xoog badan yahay ee bixinta design aan caadiga ahayn iyo soo saaridda sida ay baahida gaarka ah macaamiisha.
Qingdao Antai toogtay engeeg technology aad yaabiyo doonaa raggiisa la design caaqil, faahfaahinta cusub iyo qaybaha gaar ahaan raagaya. Waxaan kuu soo bandhigi xal guud, sida aan ku leenahay noo gaar ah horumarka, injineernimada, wax soo saarka iyo adeega-iibka ka dib.
nidaamyada oo dhan waa la baaray oo la tijaabiyey ka hor dhalmada ee siminaaro si loo hubiyo in la rakibo si dhakhso ah on site iyo samatabbixin alaabta lagu kalsoonaan karo waqtiga time.Here kasta ee Qingdao Antai,-iibka kadib markii taageero sidoo kale waa mudnaan sare si aan u hubiyo in aad hesho oo dhan caawiyo in aad u baahan tahay la abaal marin weyn system.Our aad dhowaan u dhiibay oo baaro waa ku qanacsanaanta of macaamiisheena la natiijooyinka ilaa hadda.
Shirkadda ayaa maray ISO9 0 0 1: 2 0 0 8, ISO 1 4 0 0 1: 2 0 04, shahaado CE. maamulka Our shirkadda adag sida uu qabo heerka caalamiga ah ee hawlgalka nidaamka fulinta ISO9 0 0 0 tayo leh.
Waxaan ku adkeeyey iskaashi muddo dheer ah la galayso brand caalamiga ah, sida ABB motor, Tolo sanduuqa marsho, Mitsubishi / OMRON / Siemens qaybaha korontada, dhululubo SMC, SKF & NSK dhalista, iyo khaanadaha wadnaha Asco. Iyada oo alaabta oo tayo leh, qiimaha tartan iyo adeeg u digtoon, alaabta waxaa si weyn loo iibiyo suuqyada maxalliga ah iyo dhoofiyo Amercia, Germany, Russia, Australia, Hindiya, Greece, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Uruguay, Ecuador, Colombia, Israa'iil, Ukraine, Bangladesh, Uzbekistan, Filibiin, Hungary, Makedoniya iyo Indonesia iwm
Waxaan had iyo jeer u hoggaansamaan "daacadnimo waa iibinta ugu fiican, adeeg shakhsi waa wax soo saarka ugu dambeeya. qancinta macaamiisha waa wadadii ugu weyn horumarinta shirkadaha. "Ujeeddada in la dhiso nidaam-celin qumman habka maareynta tayo leh iyo macluumaad network gudbinta si gooni gooni ah loogu talagalay macaamiisha kasta, si ay u siiyaan macaamiisha daryeelka ugu badnaan iyo maskax leh, hufan oo dabacsan adeeg buuxa.
waxaan rajeyneynaa in adiga iyo iskaashiga shirkadda ee niyada la shaqeeyo!